महन्थलाई देउवाको प्रश्न- सरकारमा आउने हो र ? – Nepal Press
महन्थलाई देउवाको प्रश्न- सरकारमा आउने हो र ?
२०७८ साउन ६ गते १४:२५
जवाफमा ठाकुरले सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा माग पूरा गराउने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताएका थिए । ठाकुरले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न सक्रियता देखाए सरकारमा सहभागी हुन समस्या नरहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो पार्टीमा केही समस्या छ, त्यो टुंगो लाग्नुपर्ने छ । हाम्रो माग पूरा गर्नुपर्‍यो, सरकारमा जानेबारे हामी विचार गर्छौं’, ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रकाशित: २०७८ साउन ६ गते १४:२५